Fahasamihafana eo amin'ny Opencart sy Magento | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Opencart sy Magento | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Technology / IT / Applications / Fahasamihafana eo amin'ny Opencart sy Magento
Fahasamihafana eo amin'i Opencart sy Magento
11 Janoary 2018 Narotsak'i Lithmee
Fahasamihafana lehibe - Opencart vs Magento
Opencart sy Magento dia rindrambaiko roa hampiharana tranokala e-commerce. Ny e-varotra dia fomba tsara hanatonan'ireo orinasa ny mpanjifany sy hifandraisana amin'izy ireo ny vokatra sy serivisiny ary hanao orinasa. Izy io dia karazana maodelin'ny orinasa izay misy ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny vokatra sy serivisy amin'ny alàlan'ny Internet . Ny e-varotra dia azo sokajiana ho fizarana maromaro arakaraka ny karazany ny fifanakalozana. Mety ho fifampiraharahana eo amin'ny orinasa sy orinasa (B2B) na orinasa amin'ny mpanjifa (B2C). Misy ihany koa ireo sehatra e-varotra maromaro sy lozisialy fiantsenana miantsena hita eny an-tsena hampivelatra ireo tranokalan'ny orinasa. Opencart sy Magento dia rindrambaiko roa toy izany. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Opencart sy i Magento dia ny Opencart dia lozisialy misokatra malalaka izay mora ampiasaina hamoronana tranokala e-commerce ary Magento dia rindrambaiko misokatra misokatra izay manana fanohanan'ny vondron'olona marobe ary miorina sy malaza amin'ny fananganana tranokala e-commerce . Ny roa dia azo ampiasaina hananganana magazay an-tserasera azo ovaina sy miasa tanteraka.
2. Inona ny Opencart
3. Inona ilay Magento
4. Ny fitoviana eo amin'ny Opencart sy Magento
5. Fampitahana mifanila - Opencart vs Magento amin'ny endrika Tabular
Inona ny Opencart?
Opencart dia rindrambaiko e-varotra open source hananganana tranokala e-commerce. Ity rafitra fitantanana fivarotana an-tserasera ity dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny PHP , MySQL ary HTML . Misy tombony vitsy amin'ny fisafidianana Opencart. Ny tombony lehibe dia ny mora sy mahitsy ny manomboka sy mivoatra amin'ny fampiasana Opencart tsy misy fampidirana sarotra. Efa misy maodely efa voaomana hanombohana ny tetikasa eo noho eo. Ankoatr'izay, ny modely dia hita ao amin'ny fivarotana modely an-tserasera. Opencart dia mifototra amin'ny lamina maodely-view-controller ary mora ampanjifaina raha toa ka manana fahalalana amin'ny PHP ny mpampiasa.
Ny lesoka sasany an'ny Opencart dia mitaky fanampiana sy fanitarana Search Engine Optimization (SEO) misimisy kokoa. Ny vondrom-piarahamonina Opencart dia tsy lehibe noho ny lozisialy e-varotra hafa toy ny Magento. Amin'ny ankapobeny, manampy ny mpandraharaha amin'ny fananganana sy fitantanana fivarotana an-tserasera amin'ny vidiny mahomby. Izy io dia mora ampiasaina ary mora tantanana. Ny olona tsy teknika dia afaka mitantana ny fivarotana an-tserasera Opencart. Ny tontonana fanaraha-maso dia mety dia tsotra ampiasaina.
Inona ilay Magento?
Magento dia rindrambaiko e-varotra misokatra. Manome fiasa maro hananganana tranokala sariaka mpampiasa sy namana fikarohana izy io. Ny transaction dia azo atao amin'ny alàlan'ny check, carte de crédit, PayPal ary ny filaharana vola. Ny tontonana admin Magento dia mahazaka baiko mora foana. Izy io koa dia manome ny tantaran'ny vokatra sy ny satan'ny vokatra. Tombony lehibe iray hafa an'ny Magento ny hoe afaka manohana vola isan-karazany sy fiteny samy hafa izy. Mora ny mikaroka, manasokajy ny vokatra ary mampiseho azy ireo amin'ny takelaka. Magento dia mifanaraka amin'ny fitaovana finday isan-karazany. Noho izany, mora ho an'ireo mpampiasa ny miditra amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny smartphone, tablette ary fitaovana hafa. Betsaka koa ny fanitarana azo alaina ao Magento.
Ny fihenan'ny Magento dia mila habaka disk sy fitadidiana lehibe. Ilaina ihany koa ny fananana tontolon'ny fampiantranoana mety. Misy pitsiny kely io. Ny olona iray izay tsy manana fahalalana ara-teknika sy tsy mahalala ny fandaharana PHP dia mety ho sarotra ny miasa miaraka amin'i Magento. Amin'ny ankapobeny, Magento dia manome ny fahafahan'ny mpampiasa manangana traikefa fiantsenana azo ekena miaraka amin'ny fitaovana SEO.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'i Opencart sy Magento?
Samy sehatra malalaka sy loharano malalaka.
Samy ampiasaina amin'ny fananganana tranokala e-commerce.
Samy novolavolaina tamin'ny alàlan'ny PHP.
Fampitaovana vaovao azo ampiana amin'ny roa.
Samy manohana fiteny maro sy vola maro.
Samy manome Optimization Search Engine.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Opencart sy Magento?
Opencart dia rindrambaiko loharano misokatra mifototra amin'ny PHP amin'ny fananganana tranokala e-commerce. Magento dia rindrambaiko manana loharanom-pahalalana mivelatra misokatra mifototra amin'ny PHP amin'ny fananganana tranokala e-commerce.
Ny tena mampiavaka an'i Opencart dia ny fijerena vokatra, naoty, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny fivarotana backup / famerenana amin'ny laoniny, ny tatitra momba ny varotra, ny hazo misy lesoka. Magento dia manana fiasa toy ny fitaovana soso-kevitra momba ny vokatra, fampiroboroboana kendrena, fizarazaran'ny mpanjifa.
Mora ny mampiasa Opencart. Magento dia mafy noho ny Opencart.
Malaza sy fanampiana ara-piarahamonina
Opencart dia manana ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina fa tsy malaza ary naorina ho Magento. Magento dia manana fanohanan'ny vondrom-piarahamonina lehibe, ary ampiasaina be io.
Opencart dia sehatra sariaka SEO nefa tsy manana loharano SEO toy ny any Magento. Magento dia misy loharano SEO bebe kokoa.
Opencart dia tsy manana extension toy ny ao Magento. Magento dia manana fanitarana maro.
Opencart dia ampiasaina amin'ny magazay kely na salantsalany. Magento dia ampiasaina amin'ny magazay antonony sy lehibe.
Opencart dia tsy azo antoka toa an'i Magento. Azo antoka kokoa i Magento.
Famintinana - Opencart vs Magento
Opencart sy Magento dia rindrambaiko e-varotra roa. Izy roa dia rindrambaiko misokatra. Ny maha samy hafa an'i Opencart sy Magento dia ny Opencart mora ampiasaina hananganana tranokala e-commerce raha Magento kosa dia manana fanampiana lehibe avy amin'ny fiarahamonina ary miorina sy malaza amin'ny fananganana tranokala e-varotra. Opencart dia mety kokoa amin'ny fampiharana kely na salantsalany raha Magento dia ilaina amin'ny fananganana rindranasa antonony na lehibe.
Ampidino ny PDF Opencart vs Magento
Azonao atao ny misintona ny kinova PDF an'ity lahatsoratra ity ary ampiasao izany ho an'ny tanjona ivelan'ny Internet toy ny isaky ny naoty. Azafady mba ampidino eto ny kinova PDF eto Ny fahasamihafana misy eo amin'i Opencart sy Magento
1.Keren, Ditsa. “Magento vs. Opencart - iza no tokony hofidinao?” CreativeMinds, 28 Mey 2017. Hita eto
2.utorialspoint.com. "Topimaso Magento.", The Point. Hita eto
3. “Magento vs. OpenCart: 2017 Fampitahana.” Magicien, 15 Jona 2017. Hita eto
1.'magento 'nataon'i Linux Screenshots (CC BY 2.0) tamin'ny alàlan'nyFlickr
Fahasamihafana eo amin'ny Office 2011 MAC sy Apple iWork Fahasamihafana eo amin'ny Office MS sy ny Office Open Fahasamihafana eo amin'ny MPEG2 sy MPEG4 Fahasamihafana eo amin'ny PNG 8 sy ny PNG 24 Fahasamihafana eo amin'ny fitrandrahana data sy ny fianarana milina
Filed Under: Applications Tagged With: Compare Opencart and Magento , Magento , Magento Applications , Magento complexity , Magento Definition , Magento Features , Magento Function , Magento Security , Opencart , Opencart and Magento Differences , Opencart and Magento Mitovy , Opencart Applications , Opencart complexity , Opencart Definition , Opencart Features , Opencart Function , Opencart Security , Opencart vs Magento
Collins Agbonghama hoy
15 aprily 2018 amin'ny 6:36 hariva
Lahatsoratra tsara amin'ny fahasamihafan'izy ireo.
Fahasamihafana eo amin'ny fivavahana sy ny finoana
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Infuse 4G sy T-Mobile G2X
Fahasamihafana eo amin'ny diplaoman'ny mari-pahaizana sy ny diplaoma momba ny diplaoma
Fahasamihafana eo amin'ny saosy sy ny endasina
Fahasamihafana eo amin'ny fanelingelenana sy ny fanonganana